Casharada Jarmalka ee Ardayda Dugsiyada Hoose iyo Dhexe
Ardayda qaaliga ah asxaabta iyo waalidiinta; Sidaad ogtahay, barta ugu weyn Turkiga ee tababarka Jarmalka oo leh boqolaal koorso Jarmal ah websaydhkeena. Markaad codsato, waxaan casharradan uqiyaasey ardayda dugsiga hoose iyo sare waxaan uqeybiney fasallo. Waxaan uqeexanay casharadeenii Jarmalka oo loo diyaariyey iyadoo la raacayo manhajka waxbarashada qaranka ee laga isticmaalo dalkeena ardayda dugsiga hoose iyo sare oo hoos ku taxan.
Casharrada Jarmalka ee hoos ku taxan guud ahaan waa hordhac iyo muuqaal casharro Jarmal ah. Maaddaama casharradeenna Jarmalka ee muxaadarooyinka badan oo muxaadarooyinka ahi aysan aad ugu habboonayn ardayda dugsiga hoose iyo kuwa sare, waxaan halkaan ku soo darnay oo keliya casharradeena fudud iyo muuqaalka ah.
Hoos waxaa ku qoran liiska casharadayada Jarmal ee lasiiyay ardayda dugsiyada hoose iyo kuwa sare ee dalkeena oo dhan. Liistada cutubyada Jarmal ee hoos ku qoran waxay u kala horreeyaan mid fudud oo dhib badan. Si kastaba ha noqotee, buugaagta Jarmalka qaarkood, nidaamka maadooyinka way ka duwanaan karaan iskuulada qaarkood.
Intaas waxaa sii dheer, inta casharka Jarmalka la bixinayo, amarka cutubyada way kala duwanaan karaan iyadoo loo eegayo istiraatiijiyadda waxbarasho ee macallinka gala casharka Jarmalka.
mowduucyada guud ahaan lagu muujiyey dugsiyada hoose iyo sare ee dalka Turkiga ayaa ah sidan soo socota.
Jarmalka iyo xilliyada Jarmalka
Lambarro Jarmal ah oo sawir leh
Saacadaha Jarmalka ee Sawirka leh
Xubno Jarmal ah oo sawir leh
Ardayda sharafta leh iyo waalidiinta, ardayda dugsiga hoose iyo kuwa sare, casharro Jarmal ah oo sawir leh oo ku jira websaydhkeenna ayaa kor lagu taxay, iyo mawduucyo cusub ayaa lagu soo kordhiyaa degelkeenna xilliyada qaarkood. Boggan waa la cusbooneysiin doonaa markii casharrada cusub ee Jarmalka lagu daro.
Tags: 6. casharada alman ee fasalka, 7. casharada alman ee fasalka, Maadooyinka Jarmalka ee fasalka 7aad, 8. casharada alman ee fasalka, Maadooyinka Jarmalka ee fasalka 8aad, jarmal loogu talagalay carruurta, casharada jarmalka ee caruurta, Casharada Jarmalka ee dugsiyada hoose, dugsiga dhexe casharo Jarmal ah